Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ ekwupula nkwado ọchịchị ya nye ndị ọrụ ugbo na steeti ahụ iji kwalite ji na ihe ndị ọzọ a na-akọpụta n'ubi n'ahọ na-abịa abịa. Gọvanọ Obiano kwuru nke a na mmemme iri ji ọhụụ izugbe ndị Anambra nke ahọ 2017, bụ nke weere ọnọdụ n'izu ụka gara aga n'ama egwuruegwu Alex Ekwueme dị n'Ọka bụ isi obodo steeti ahụ.
O kwuru na site na mmekọrịta nke ọchịchị ya, ụlọ ọrụ nnọrọ onwe na ndị na-akọ ọrụ ugbo n'ime ime obodo, na e nweela nri gbaa nyụụ na steeti ahụ, ma sịkwa na ọ ga-enye nkwado dị ukwu ma tinye aka n'ịkọpụta ji n'ahọ na-abịa abịa, ọ kachasị iji hụ na e nwere n'ozuzu oke, ji a ga-ebupu mba Yụnaịted Steeti nke Amerika, dịka ha na-achọsi ji steeti Anambra ike ugbu a.
Ọ kọwara mmemme iri ji ọhụụ dịka omenala na njirimara Igbo dịbara kemgbe gboo, bụ nke e si na ya akwalite ịdị n'otu ụmụ mmadụ, ma sị na ọchịchị ya ga na-aga n'ihu ịkwado omenala na ọdịnala Igbo dị ezi mma. Ọ rịọkwazịrị ndị Anambra ka ha kwado ọchịchị ya nke ugboro abụọ, bụ nke ọ sị na ọ ga-eweta ezi olile anya nyegara ụmụafọ steeti ahụ na ndị Igbo n'izugbe.
Ka ọ na-eme omenala ịwa ji, eze ọdịnala Ọkpụnọ n'okpuru ọchịchị Ọka saụtụ bụ Igwe Sunday Okafọr sị na ọ bụ ezie na ụfọdụ obodo dị iche iche na steeti ahụ emeela mmemme iri ji ọhụụ n'ahọ ha, mana mmemme ahụ bụ ihe dị ezi mkpa ma bụrụkwa nke pụrụ iche n'ihi na ọ na-akwalite udo tọrọ atọ na ịdịkọ n'otu na steeti ahụ. Ọ sị na dịka agụ bụ eze ụmụ anụmaanụ niile, na otu a ka ji bụkwa eze ihe niile a kọrọ n'ubi, dịka o si dị n'omenala Igbo.
N'okwu nke ya, onyeisi oche kọmitii mgbasa ozi n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti bụ maazị Kingsley Iruba kọwara mmemme ahụ dịka ihe ga-eweta mmepe na steeti ahụ ma kwalitekwa ego a na-enweta na ngalaba njem nlegharị anya.
Eze ọdịnala Ọka bụ Obi Gibson Nwosu, nke Ụmụeri bụ Igwe Sà Ben Emeka, ogbo ya nke Agụleri bụ Igwe Christopher Idigo, nke Nanka bụ Igwe Ogo Ezeilo, na onye nọgodi ugbu a n'ọnọdụ Igwe Ojooto bụ maazị Gerald Mbamalụ n'otu n'otu toro mmemme ahụ, ma kpọọ oku ka e nwekwuo ihe mwunye n'ebe o metụtara iji akụrụngwa ọgbara ọhụụ akọ ọrụ ugbo iji mee ka ọ na-amị akpịrị ma mekwa ka steeti ahụ nọrọ n'ezi ihu n'ịkọpụta nri n'ala anyị.
Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ gụnyere: onyeisi Ọhaneze Ndị Igbo na steeti ahụ bụ maazị Damian Okeke-Ogene, onyeisi izugbe nke otu ASATU bụ Alex Ọnụkwue na ọtụtụ ndị ọzọ selitere isi na ngalaba dị iche iche na steeti ahụ, ndị bịara ya bụ mmemme, bụkwa ndị kpọkuru ụmụ na-eto eto ka ha jigidesie omenala Igbo ike ma na-agbasikwa mbọ ike ịhụ na o funahịghị ha.
Iri ji ọhụụ Anambra ahọ 2017 bụ nke ụlọ ọrụ ministịrị na-ahụ maka ihe na-eme na mba ọzọ, ọdịnala na njem nlegharị anya na steeti ahụ chịkọbara ma bụrụkwa nke mbụ na mbụ ọ na-ahazi.
A nọrọ na mmemme ahụ wee gbaa mgba (ma ụmụ agbọghọ ma ụmụ okorobịa); sọọ mpi onye ji ya kachara wee buo ibu n'ahọ a, ma gbakwazie egwu ọdịnala dị iche iche site obodo dị iche iche e nwere na steeti ahụ.